Stratis 2.1 waxay la timid taageero loogu talagalay sirta qaybinta iyada oo la adeegsanayo LUKS2 | Laga soo bilaabo Linux
Horumarinta Red Hat iyo bulshada Fedora, dhawaan ku dhawaaqay daahfurka nooca cusub ee mashruuca Stratis 2.1 taas oo timaadda 7 bilood ka dib oo ay wada shaqeeyaan iyo taas dhexdeeda, shaqadu waxay diiradda saartay taageerada qaybinta qaybinta iyada oo la adeegsanayo LUKS2.
Kuwa aan aqoon u lahayn Stratis, waa inaad ogaataa inay taasi tahay daemon ay soo saartay Red Hat iyo bulshada Fedora si loo mideeyo loona fududeeyo dejinta meelaha isticmaalaha kaas oo qaabeeya oo kormeera qaybaha hadda jira ee hoosta ka kooban qaybaha kaydinta Linux ee maaraynta mugga LVM iyo nidaamka faylka XFS ee D-Bus.
Siyaabo badan, nidaamku wuxuu ku celceliyaa aaladaha maaraynta kala qaybinta ee ZFS iyo Btrfs, laakiin waxaa loo hirgaliyaa sida lakab (stratisd) ah oo ka shaqeeya dusha sare nidaamka 'Linux kernel-tool-mapper' (modules dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-) dm duullaan iyo daacadnimo) iyo nidaamka faylka XFS.
1 Ku saabsan Stratis
2 Maxaa ku cusub Stratis 2.1?
3 Sidee loo rakibaa Stratis?
Ku saabsan Stratis
Stratis waxay bixisaa astaamaha qaabka ZFS / Btrfs iyadoo la isku darayo lakabyada tikniyoolajiyadda jira- Nidaamka khariidadaha maareynta qalabka Linux iyo nidaamka faylka XFS. Stratisd daemon wuxuu maareeyaa uruurinta aaladaha xannibaadda wuxuuna bixiyaa D-Bus API.
Stratis-CLI waxay bixisaa aalad xariiq amar ah Stratis, oo iyaduna adeegsata D-BUS API si ay ula xiriiraan stratisd.
Si ka duwan ZFS iyo Btrfs, qaybaha Stratis waxay ka shaqeeyaan kaliya meelaha isticmaalaha umana baahna inay soo xareeyaan qaybo ka mid ah noocyada loo yaqaan 'kernel modules'. Mashruuca waxaa markii hore loo soo bandhigay inuusan u baahnayn maaraynta khabiir ku takhasusay nidaamyada kaydinta si loo maareeyo qiimeynta.
D-Bus API iyo kilil-utility ayaa loo bixiyaa maareynta. Stratis waxaa lagu tijaabiyay aaladaha loo yaqaan 'block block based on LUKS (encryption partitions), mdraid, dm-multipath, iSCSI, LVM volume macquul, iyo sidoo kale darawallo adag oo kala duwan, SSDs, iyo NVMe drives.
Maxaa ku cusub Stratis 2.1?
Noocaan cusub ee mashruuca ayaa xusid mudan ku darista taageerada si loo maareeyo Qarsoodi qaybinta adoo adeegsanaya LUKS2, taas oo ah fulin aad u fudud in loo adeegsado maaraynta qormooyinka iyo unugyada keydinta sirta ah ee GNU / Linux.
Nooca sirta ah ayaa lagula talinayaa in lagu isticmaalo qalabka mobiles, laptop iyo aalado keydinta macluumaadka aad rabto inaad ilaaliso haddii ay dhacdo lumitaan ama xatooyo.
Mid ka mid ah isbeddelada isku dhafan Stratis 2.1 waa taas daemon ayaa hadda gacanta ku haysa taageerada sirta, xiritaanka warbixinno / codsiyo taxane ah khaladaadka ku saabsan shaqeynta noocan ah iyada oo la tixgelinayo nidaamyada kale ee casriga ah ee Linux ee bixiya taageero si fudud loo maareeyo taageerada sirta
The Iskuxirka Warbixinta D-Bus si loo soo saaro warbixinno qaab JSON ah, iyo sidoo kale Aqoonsiga qalabka dib loo qoray iyo nambarka bilowga.
Isbeddelada kale oo ka dhex muuqda noocyadan cusub:
Xaqiijinta firfircoon ee nooca demon stratisd
Khalad ayaa lagu hagaajiyay jiilka fariin qalad ah oo abuuri kara, iyo sidoo kale hagaajinta fariimaha qaladka xaaladaha qaarkood
Hagaajinta tijaabada Blackbox
Waxaa kale oo lagu sheegay muuqaalada sida RAID, xoqitaanka xogta, nuqulka iyo dulqaadka qaladka wali lama taageerin, laakiin waa loo qorsheeyay mustaqbalka.
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan noocaan cusub, waxaad ka eegi kartaa liiska isbeddelada Xiriirka soo socda.
Sidee loo rakibaa Stratis?
Stratis ayaa loo heli karaa RHEL, CentOS, Fedora iyo waxyaabo la mid ah. Rakiibideedu waa wax iska fudud, maadaama xirmadu ku dhex taallay bakhaarrada RHEL iyo sidoo kale noocyadeeda kala duwan.
Si loo rakibo Stratis kaliya ku socod amarka soo socda terminal:
Ama sidoo kale waad isku dayi kartaa tan kale:
Marka lagu rakibo nidaamka, waa inuu awood u siiyaa adeegyada Stratis, waxay ku sameeyaan tan iyagoo fulinaya amarradan soo socda:
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan qaabeynta iyo isticmaalka, waxaad booqan kartaa xiriirka soo socda. https://stratis-storage.github.io/howto/
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Stratis 2.1 waxay la timaaddaa taageero loogu talagalay qaybinta qaybinta iyada oo la adeegsanayo LUKS2
Kuwani waa astaamaha cusub ee Elementary OS